Xadeyn iyo mamnuucid - Krisinformation.se
TB13 Regler och förbud So
Halkan waxaad ka heleysaa waxyaabo la ururiyay oo ku aaddan xadeynta iyo mamnuucidda laga dhaqangeliyay Iswiidhan, feyruska corona awgiis.
Uppdaterades 15 jun 2021 17:08
Talaabooyin iyadoo xeerka cudurka aafada la isticmaalaayo
Laga bilaabo Sibtembar 2021 waxa shaqeyn doona sharci cudurka aafada oo ku meel gaar ah. Waxay micnaheedu tahay in waxqabadyada qaarkood oo aanay khuseynin/dabooleynin sharci dejinta xakameynta cudurka aafada la xiri karo ama la xaddidi karo.
Xukuumadu waxay soo rogtey xayiraado dhowr ah iyadoo la kaashanaayo sharciga cudurka aafada.
Ilaa iyo muddo aan cayimneyn waa inaan wax ka badan sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Booliisku ayaa baajin kara ama kala diri kara kulamada guud ee ay joogaan wax ka badan 8 ka qeybqaate.
Haddii isku imaadyada gaar lagu qabto lookaal xafladaha, lookaalada jaaliyadaha/ururada iyo goobaha kale ee la kireysto, waa in ugu badnaan sideed qof ay ka qeybqaataan.
Waxa taas ka reeban aaska, oo ay joogi karaan ilaa iyo 20 ka qeybqaate.
Haddii aad abaabulayso/qabanqaabinayso kulan jabinaaya mamnuucida ayaa lagugu xukumi karaa ganaax ama xabsi kaas oo ugu badnaan lix bilood ah.
Dukaamada waawayn, dukaamada, barkadaha dabaasha, jiimka iyo hoolalka isboortiga
Tirada ugu badan ee iskugeynta aaga meheradda waa inaanu marka ka badanaan 500 oo qof.
Dukaamada waawayn iyo dukaamada ayaa qaadi doonta talaabooyinka ku haboon in loogu hubiyo in dadku ay qofqof waxqabadyada ugu soo booqdaan iyagoo aanay cidi la socon. Jiimka, barkadaha dabaasha iyo hoolalku waa inay tiriyaan tirada dadka soo booqanaaya si uu qof kastaa toban mitir oo laba jibbaaran ugu helo. Waa in waxqabadyadu ay leeyihiin calaamado si cad dadka soo booqdayaasha ah ugu muujineysa inta qof ee loo oggol yahay inay qolka ku jiraan isla hal waqti.
Waxa uu Länsstyrelsen u xilsaaran yahay in la hubiyo in xeerarka la raaco.
Waxyaalo la isku soo ururiyey oo dharciyada cudurka faafa ayaa ku jira bogga internetka ee Länsstyrelsen Dalarnas . (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Kulan dadweyne micnahiisu waa:
kulamada ah mudaharaadyo ama sideedaba loo qabto in lagu wada-xaajoodo, lagu cabiro fikradaha ama soo bandhigid guud ama arrimo gaar ah
muxaadarooyinka iyo casharo la jeedinayo kuwaas oo loo qabtay waxbarasho ahaan ama loogu talogalay soo gudbin fikrado guud ama muwaadin ahaan
kulamada loo qabto diin ahaan
soo bandhigyada masrax, bandhigyada shaneemo, bandhig heeso iyo kulamada kale ee loogu talogalay in lagu soo gudbiyo alaab farshaxan ah
kulamada kale ee xoriyada kulanka lagu dhaqmayo
Xaflad dadweyne micnaheedu waa:
tartamada iyo soo bandhigyada isboortiga, ciyaaraha iyo duulista
bandhigyada qalaamaa rogadka kolba meel taga iyo xaflad
suuqyada iyo carwooyinka
kulamada xafladaha kale ee aan loo arkin kulamo dadweyne ama bandhigyada qalaamaa rogadka kolba meel taga
Iskoolada, gaadiidka dadweynaha, munaasabadaha shakhsiga ah iyo booqashada dukaamada ma ku jirto arimahaas.
Waxyaabaha ka reeban ee xafladaha/munaasabadaha- dhaqanka iyo isboortiga
Laga soo bilaabo 1 noofembar ayay xafladaha dhaqanka iyo isboortiga lahaan karaan dadweyne daawanaaya oo fadhiya oo ugu badnaana 300 oo qof ah.
Si ay xaflad/munaasabad ugu hesho 300 oo ka qeybqaatayaal ah, waa in qof kasta oo ka mid ah dadweyneha daawanaaya uu haystaa kursi uu ku fadhiisto isagoo ugu yaraan hal mitir u jira ka qeybqaataha kale. Laba qof oo iyagu wada socda ayaa dabcan laga yaabaa in la geeyo meel ka dhow hal mitir.
Waxay dhammaan maamulada goboladu ay hase yeeshee doorteen inay dhacdooyinka noocan ah ugu badnaan 8 qof ku xadidaan.
Kulamada sannadeedyada iyo shirweynayaasha qaranka ee inta lagu gudojiro cudurka aafada
Waxa ururada lagula talinayaa inay kulamada sannadeedyada iyo shirweynayaasha qaranka dib u dhigaan ama ay dhijitaal ahaa ku qabtaan. Shirkadaha saamiyada laysku darsaday iyo ururada dhaqaalahu ayaa isticmaali kara wakiillada iyo boostada ku codeynta, sida waafaqsan sharci kumeelgaar ah. Halkan ayaanu ku soo ururinay macluumaad ku saabsan waxyaalaha khuseeya kulamada sannadeedyada iyo shirweynayaasha qaranka ee inta lagu gudojiro cudurka aafada
Sharciga kumeelgaarka ah ee shirkadaha saamiyada laysku darsaday iyo ururada dhaqaalaha
Sida waafaqsan sharci kumeelgaar ah si loogu fududeeyo qabashada shirweynayaasha qaranka ee ururada iyo shirkadaha inta lagu gudojiray cudurka aafada ayaa dhaqan galay Abriil 2020. Waxa uu sharcigu suurtogalinayaa isticmaalka wakiillada iyo boostada ku codeynta. Waxa ay xukuumadu go'aansatay in sharcigu illaa 31 Diseembar 2021 shaqeeyo. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciga ku meel gaarka ah ka akhriso bogga internetka ee Bolagsverket. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Talobixinta guud ee ku socota ururada iyo shakhsiyada gaarka ah
Sida ku xusan xeerarka iyo talobixinta guud ee Folkhälsomyndigheten, ayay qof kasta mas'uuliyad ka saaran tahay si loogu dhimo khatarta faafitaanka fayruska covid-19.
Urur ahaan waa inaydun:
haddii ay suurtogal tahay dib u dhigtaan ama ay dhijitaal ahaa ku qabtaan kulamada sannadeedyada iyo shirweynayaasha qaranka ee ururka.
iska ilaalisaan qabashada shirarka kale ama ay dhijitaal ahaan ku sameeyaan
Shakhsi ahaan, waxa waxyaalaha aad sameynayso ka mid ah inaad:
masaafad u jirsato
guriga joogto haddii aad calaamado leedahay.
xaddido xiriirada dhow oo kaliya wada joogtaan/la-dhaqanto dadka aad caadi ahaan la kulanto
waxa la door bidayaa inaad dibada wada joogtaan
Samee qiimeyn khatarta
In dad badan isla hal meel lagula kulmo ayay taas micnaheedu yahay khatar sii kordheysa oo faatitaanka fayruska ah. Waxay Folkhälsomyndigheten soo saartay aalad qiimeynta khatarta taas oo loogu talogalay in ururada iyo waxqabadyada kale loo isticmaali karro. Waxaad aalada ka helaysaa Bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Shuruucda iyo mamnuucida
Ma jirto wax mamnuucitaan ah oo ku saabsan shirarka ururada sida waafaqsan xeerka cudurada faafa. Waxaana sidoo kale jirin wax mamnuucid ah oo xadideysa tirada ka qeybqaateyaasha haddii kulanka lagu qabto qof gurigiisa ama xadiiqadiisa. Haddii kulanka lagu qabto lookaal la kireysto ama haddii loo arki karo inuu yahay kulan guud ayaanay tirada ka qeybqaateyaashu ka badnaan karin siddeed qof. Si loogu arko inuu kulanku yahay mid guud ayaa loo baahan yahay in dadweynaha loo qabto ama in dadweynuhu helaan fursad ay ku imaanayaan. Wax dheeraad ah oo ku saabsan kulamada guud ka akhri bogga internetka ee booliiska. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Shuruud ah tijaabo negatif ah/inaan la qabin covid-19 oo laga rabo dadka ajaanibka ah.
Muwaadiniinta ajaanibka ah ee 18 sanno jirka ah ama ka weyn waa inay warqad shahaado ah oo natiijo tijaabo muujinaysa inaan la qabin/negatif ah covid-19 tusaan si ay Iswiidhan ugu soo safraaan. Waxa hase yeeshee, jira waxyaabo shuruuda tijaabada ka reeban, (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish) tusaale ahaan muwaadiniinta ajnabiga ah ee Iswiidhan ka diiwaangashan, ama Iswiidhan degan ee haysta sharci deggenaasho ah oo shaqeynaaya, xuquuqda degganaanshaha ama meeqaamka degganaanshaha ah haysta. Shuruuc gaar ah ayaa sidoo kale khuseeya ka soo gelitaanka wadamada ka baxsan Midowga Yurub iyo sidoo kale Boqortooyada Ingiriiska, Danmark iyo Norway, xagga hoos ka fiiri.
Waa inay ugu badnaan 48 saacadood ka soo wareegeen inta u dhaxaysa marka tijaabada lagaa qaaday iyo marka xadka laga gudbaayo. Dadka shaqada maalinkasta ugu safra iyo dadka xadka ka shaqeeya waa inay tusi karaan tijaabo ugu badnaan hal todobaad ah. Waxay xeerarka cusubi kaabayaan xayiraadii soo gelitaanka ee hore ugu jirtay.
Tijaabooyinka noocan ah ayaa la ogol yahay: Tjaabada Antigen-ka, tijaabada PCR-ka, tijaabada LAMP-ga iyo tijaabada TMA-da.
Macluumaadkaasi waa inuu warqada shahaado ah ku qoran yihiin si ay qaar ansaxsan/shaqeynaaya ugu noqdaan:
Magaca qofka tijaabada laga qaadey
Xiliga tijaabada la qaaday
Nooca tijaabada la qaaday haddii ay tahay tijaabada Antigen-ka, tijaabada PCR-ka, tijaabada LAMP-ga iyo tijaabada TMA-da.
Cidda warqada shahaadada ah bixisay
Waa inuu macluumaadku ku dhigan yahay af Iswiidhish, Ingiriisi, Norwiiji ama Deenish.
Macluumaadka Folkhälsomyndighetens ee ku saabsan shuruuda tijaabada (boggu waxa uu ku qoran yahay Iswiidhish)
Soo galitaan Midowga Yurub oo laga mamnuucay wadamada ka baxsan
Mamnuucid ayaa saaran safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada Midowga Yurub ka baxsan. Waxay mamnuucidu shaqeynaysaa ilaa 31 Ogosto 2021.
Dhowr waddan ayaa laga dhaafay tan. Waxa go'aaminayaa waa haddii aad ku nooshahay mid ka mid ah waddamada, ee ma aha inaad dhalashadooda sidato. Dadka Iswiidhan u soo safraaya waa inay sidaa darteed u diyaar garoobaan inay cadeeyaan inay degan yihiin mid ka mid ah waddamadaa si loogu ogolaado inay inay soo galaan:
Muwaadiniinta Iswiidhishka ah iyo muwaadiniinta dalalka kale oo Midowga Yurub/EES ayaanay khuseynin mamnuucida soo gelitaanku. Muwaadiniinta ka soo jeeda waddan kale ee Midowga Yurub/EES-ta ahi waa inay tusaan tijaabo cadeynaysa inaan covid-19 la qabin oo ugu badanaan 48 saacadood jir ah. Waxa muwaadiniinta Iswiidhishka ah lagula talinayaa inay marka wadanka dibadiisa soo joogeen ka dib ay istijaabiyaan.
Baaritaanka/kantaroolka xadka Iswiidhishka ah ayaa go'aaminaaya sida ka reebanaanta loo turjumaayo iyo noocyada go'aamada la gaaraayo, laakiin waa masuuliyada qofka musaafirka ah inay baaritaanka xadka u cadeeyaan xaqa ay u leeyihiin ka reebanaanta. Waxa sidaas darteed loogu baahan yahay in tusaale ahaan la tusi karo cadeyn shaqo ama warqad laga soo qaatay diiwaanka qaranka.
Booliiska kala soo xiriir telefoonka 114 14 haddii aad qabto su'aalo khuseeya soo galitaanka Iswiidhan.
Waxaad boggagan xukuumada iyo Booliiska ku jira macluumaad dheeraad ah oo soo galitaanka ku saabsan.
(Boggagu waxay ku qoran yihiin af Iswiidhish)
Su'aalaha iyo jawaabaha Wasaarada Cadaaladda ee ku saabsan mamnuucida soo gelitaanka ee wadamda ka tirsan Midowga Yurub iyo Iswidhan
Macluumaadka Booliiska ee ku saabsan xayiraada soo gelitaanka iyo waxyaabaha ka reeban (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Jawaabta Booliiska ee su'aalaha badanaa waxyaalaha ku saabsan mamcuunida soo galitaanka la iska weydiiyo
Booliiska iyo safarada gaari laga soo raaco Norway
Xukuumada iyo sii dheereynta mamnuucida soo galitaanka dalka
Xukuumada iyo ka reebanaanta shuruuda tijaabada
Ka imaanshaha wadamada Yurub gudaheeda
Qofka Iswiidhan uga soo safraaya waddamada kale ee ka tirsan EES-ta ayaa loo oggolaanayaa inuu soo galo haddii uu tusi karo tijaabada covid-19 oo muujineysa inaan la qabin taas oo 48 saacadood jir ah. Waxa boqortooyada Ingiriiska markaas khuseeya xayiraadda guud ee saaran soo galitaanka waddamada ka baxsan Midowga Yurub/EES.
Haddii aad waddanka dibadiisa joogtey
Shuruud ayay tahay inaad markaad wadanka soo gasho aad sidato tijaabo muujinaysa inaanad qabin fayruska
Wixii safaro ah ee Danmark, Finland, Island iyo Norway, toos loogaga imanaayo Iswiidhan ayaanay wax shuruud ahi saarneyn in marka la soo galo la haysto tijaabo muujineysa inaan la qabin covid ahi. Muwaadiniinta dhalashada wadamada kale sita ee wadamada kale oo dhan ka imaanaaya waa inay tusaan natiijada tijaabo muujineysa inaan la qabin covid, haddii aan laga mid aheyn mid ka mid ah kuwa ka reeban shuruuda saaran tijaabada.
Waxyaalaha ay Folkhälsomyndigheten soo jeedinayso marka la soo galo ka dib
Muwaadiniinta Iswiidhishka ah iyo kuwa dhalashada wadamada kale sita ee ka soo safray Midowga Yurub/EEA, aagga Schengen, Boqortooyada Ingiriiska iyo qaar waddamada seddexaad ka mid ah ayaa laga reebayaa talobixinta Folkhälsomyndigheten ee ah inay is tijaabiyaan markay Iswiidhan soo galaan ka dib oo ay hal todobaad is karantiimeeyaan.
Dadka musaafiriinta ah ee wadamada kale oo dhan ka yimaada waxa shaqeynaaya talobixinta aheyd inay is tijaabiyaan oo ay is karantiimeeyaan hal todobaad ka dib markay soo galaan, xitaa haddii aanay calaamado lahayn.
Dadka tallaalada wada dhameystay ee aan calaamado laheyn ayaa talobixinta Folkhälsomyndigheten ee is tijaabinta iyo is karantiimeynta marka la soo galo ka dib laga saarayaa iyadoon loo eegeynin meesha la soo joogay ka hor intaan Iswiidhan la soo galin.
Wax dheeraad ah ka akhri bogga internedka ee Folkhälsomyndigheten.(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Dhamaan goobaha adeega/makhaayadaha waa inay qaadaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka covid-19.
Ugu badnaan afar qof ayay tahay inay miis wada fariistaan. Haddii dadka wada socda ay ka badan yihiin, waa in loo kala qeybiyo dhowr miis oo uu ugu yaraan hal mitir u dhexeeyo.
Goobaha adeega waa inay sidoo kale sameeyaan talaabooyin oo ay hubiyaan inay:
Ka hor tagaan saxmadda ka dhaceysa meelaha ay dadka soo booqdayaasha ahi joogaan. Dadka soo booqdeyaasha ahi waa inay ugu yaraan hal mitir ka fogaan karaan dadka kale.
Kaliya cuntada iyo cabitaan u geeya uun kuwa fadhiya miiska ama miiska baarka. Hase yeeshee, waxay dadka soo baaqdayaasha ahi ay dalban karaan oo ay iyagu soo qaadan karaan cuntadooda iyo cabitaankooda haddii ay taasi u dhici karto iyadoo aanay saxmad/ciriiri badan dhaceynin oo ugu yaraan hal mitir masaafada ah dadka soo booqdayasha kale loo jirsanaayo.
Dadka soo booqdayaasha ahi waxay leeyihiin fursad ay gacmaha saabuun iyo biyo ugu dhaqayaan ama siiya isbiirtada gacmaha.
Ku wargaliya dadka soo booqdayaasha siday ugu yarayn karaan halista faafitaanka cudurka oo hubi inay shaqaaluhu helaan aqoon ku saabsan sida looga hortagaayo faafitaanka fayruska ee dadka soo booqdayaasha ah dhexdooda ka dahcaaya.
Waxaan goobaha adeega/makhaayadaha la ogoleyn in miiska wax la iskugu geeyo wixii saacada 20.30 ka danbeeya. Goobaha adeega/makhaayadaha waxay u furnaan karaan iibinta cuntada iyo cabitaanka aan lagu cuneynin goobta, waxa loola jeedaa ka qaadashada/takeaway.
Kaliya hal qof miiskiiba ayaa loo ogol yahay goobaha makhaayadaha ee qeybta ka ah xarumaha ganacsiga.
Kamuunada ayaa mas'uul ka ah kormeerida goobaha adeega/makhaayadaha. Haddii aad dareemeyso inaan la raaceynin xeerarka ayaad la xiriiri kartaa kamuunka ay goobta adeegu ku taalo.
Xadidaadaha cusub ee wax la waafajiyey laga bilaabo 1 Juun 2021.
Laga bilaabo 1 Juun, ayaa xadidaado wax la waafajiyey ay shaqeyn doonaan. Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Folkhälsomyndigheten. (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)